Seddexdii Guul Ee Ugu Xiisaha Badneyd Ee Manchester United Ku Gaartay Etihad Stadium Horyaalka Premier League | Laacib.net
08-11-2018 Saed Balaleti Comments Off on Seddexdii Guul Ee Ugu Xiisaha Badneyd Ee Manchester United Ku Gaartay Etihad Stadium Horyaalka Premier League
Manchester City waxay mar walba ku hoos jirtay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Manchester United ilaa iyo uu Sheekh Mansuur iibsaday. Lacagtii uu geliyay kooxda ayaa ka caawisay City inay xiddigo tayo leh ka kala keensadaan daafaca dunida.
Waxa ay Manchester City ka dhigtay mid ka mid ah kooxaha ugu adag waqti xaadirkaan. Pep Guardiola ayaa bedelay qaabka kubada looga ciyaaro England. Waxa uu Premier League ka qabtay qoorta, waxaana weli hogaanka u hayaa tan iyo xilli ciyaareedkii hore.
Man City ayaa haatan hogaamineysaa horyaalka iyagoo u muuqda inay yihiin koox aan laga badin karin waqti xaadirkaan. Tayadooda oo ay sii dheer tahay falsafadooda weerar ayaa ka dhigeysa City mid difaacan karta horyaalka Premier League.
Si kastaba, kulanka Manchester Derby ma ahan mid ku xiran kaalinta ay kooxaha ku jiraan ama guulihii hore. Etihad waa meel adag maalmahaan, inta badana kooxaha waa lagu soo xasuuqaa.
Sannadihii u danbeeyay City ayaa gacanta sarre laheyd kulankaan, laakiin United iyagana qeybta guulahooda waa ay heleen. Laacib.net waxa ay halkaan idiin kugu soo gudbineysaa seddexdii guul ee ugu fiicneyd ee Manchester United ay Man City kaga gaartay Etihad Stadium horyaalka Premier League, kama hadleyno tirada goolasha balse muhiimada guusha iyo waqtiga la ciyaaray kulanka.
#3 Man City 0 – 1 Man United (April 2010)
Ka hor kulankaan, tababare Sir Alex Ferguson waxa uu ogaa in horyaalka uu u socdo London, laakiin guul ay gaaraan waxa ay la micno aheyd in Manchester United ay weli heysato fursad ay ku soo qaban karaan Chelsea. Waxa ay aheyd mid ka mid ah qaab ciyaareedyadii ugu liitay ee City iyadoo Craig Bellamy uu fursado sahlan qasaariyay halka xiddigaha sida Tevez iyo Adebayor ay ku guuldareysteen inay jabiyaan daafaca United.
Ciyaarta waxa ay ku socotay barbaro goolal la’aan ah markii Paul Scholes uu qalbiyada jamaahiirta City ku jabiyay gool uu dhaliyay daqiiqadii 93aad. Tababarihii markaas ee City Mancini ayaa ka xumaaday qaabka ay kooxdiisa isku dhiibtay dhamaadkii ciyaarta, waxaana uu ciyaartoydiisa ka dalbaday jawaab fiican inay ka bixiyaan.
Guushaas waxa ay aheyd tii seddexaad ee United ay gaarto xilli ciyaareedkaas oo ay goolka guusha dhaliyaan waqtiga dhimashada. Laakiin guushaas kama aysan caawin Sir Alex inuu hanto horyaalka balse waxaa lagu xusuusan doonaa goolkii Paul Scholes uu dhaliyay Fergie Time.
#2 Man City 2 – 3 Man United (April 2018)
Kooxda Pep Guardiola ee Manchester City waxa ay ahaayeen kuwa horyaalka la ordaya. Kooxda ay inta badan kooxaha Premier League waxa ay ku ceebeysatay Etihad Stadium. Manchester United si fiican ayay xilli ciyaareedka ku bilaabatay laakiin waqti adag ayay bartamihii wajaheen taasoo keentay in City horyaalka la fakato laakiin kulankii Etihad waxa uu ahaa mid xusuus leh.
Ka hor kulan, waxaa jiray warar xan ah oo sheegayay in qilaaf uu u dhaxeeyo Paul Pogba iyo Jose Mourinho iyadoo wakiilka Pogba ninka lagu magacaabo Mino Raiola la sheegay inuu City u bandhigay inay Pogba la wareegaan. Hamigii horyaalka ee United waxa uu ahaa mid dhintay waxaana ay u ciyaarayeen kaalinta labaad.
Guul ay gaaraan Red Devils waxa ay la micno aheyd in kooxda Guardiola ay u baahan yihiin inay sugaan kulan kale si ay u xaqiijistaan hanashada horyaalka.
Iyadoo intaas oo dhan loo ciyaarayo, City ayaa wacdarro dhigtay 30kii daqiiqo ee ugu horeysay iyagoo ciyaarta ku hogaaminayay 2-0, weliba goolasha intaas waa ay ka badnaan lahaayeen haddii Sterling uu ka faa’ideysan lahaa fursadihiisa.
Qeybtii labaad Manchester United ayaa hurdada ka kacday waxaana kacaankooda hogaaminayay Paul Pogba. Markii ay heleen goolka koowaad, daqiiqado gudahood waxa ay dhaliyeen labo gool kale iyagoo ciyaarta ku hogaaminayay 2-3.
Kooxda Pep ayaa xilli danbe iyagana weerar qaaday si ay helaan barbaro laakiin United ayaa difaac adag xiratay. Waa mid ka mid ah soo laabashooyinka ugu xusuusta badan ee kulanka Manchester Derby.
#1 Man City 2 – 3 Man United (Dec 2012)
Xilli ciyaareedkii 2011-12 waxaa horyaalka maalintii ugu danbeysay ku guuleysatay Manchester City, waxaana weli lagu xusuustaa goolkii uu waqtiga dhimashada u dhaliyay Aguero ee ay ku hanteen horyaalka.
Ka dib markii ay horyaalka u waayeen City, xilli ciyaareedkii ku xigay tababare Sir Alex Ferguson ayaa isbedel ku sameeyay kooxdiisa waxaana uu Robin van Persie kala soo wareegay Arsenal adduun lacageed oo gaaraya 22.5 milyan ginni.
Xiddiga reer Holland waqti dheer kuma aysan qaadanin inuu la qabsado United, isagoo seddexleey ka dhaliyay Southampton bilowgii xilli ciyaareedka. Si kastaba, kulankii ay la ciyaareen Manchester City ayaa ka dhigay inay jeclaadaan jamaahiirta Old Trafford.
Labo gool uu dhaliyay Wayne Rooney ayay United hogaanka ku qabatay, laakiin Manchester City ayaa iska caabin sameysay iyagoo kansalay labada goolba, tan hore waxaa u dhaliyay Yaya Toure halka tan labaad uu dhaliyay Zabaleta. Koox kasta ayay guusha raaci kartay 25kii daqiiqo ee ugu danbeysay.
Kooxda Shayaadiinta Cas Cas ayaa waxa ay waqtigii dhimashada ciyaarta heleen laad xor ah oo uu Robin van Persie go’aansaday inuu tuuro. Darbadiisa waxa ay ku dhacday darbigii xiranayay laakiin waxa ay gashay shabaqa iyadoo goolhaye Joe Hart uu u waayay wax fursad ah.
Waxa ay aheyd gool kale oo daqiiqada ugu danbeysa ay dhaliyeen United taasoo muhim u noqotay in Sir Alex Ferguson uu qaado horyaalkii 13aad ee Premier League xilli ciyaareedkiisii ugu danbeysay ee kooxda.